“ရွှေမြန်မာ”: Blogger Gathering and Blogging Excursion
Blogger Gathering and Blogging Excursion
ကျွန်မတို့ တစ်လတိတိ မီတင်ပေါင်းများစွာ လုပ်ပြီး စီစဉ်ခဲ့ရတဲ့ Blogger Gathering and Blogging Excursion ရဲ့ ပထမပိုင်း အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ Gathering ကတော့ ဒီနေ့မှာ အောင်မြင်စွာ ပထမပိုင်း ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ ညမှ ပြည်ကို ထွက်ခွာမယ့် အပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလေးကို စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ကန်တော်ကြီးမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးနေကျဖြစ်သော ဘလောဂ့်ဂါများသာမက၊ မတွေ့ဖူး မမြင်ဖူးသော ဘလောဂ့်တွေလည်း လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံပွဲလေးမှာ စုစုပေါင်း ဘလောဂ့်ဂါ သုံးဆယ့်ငါးယောက် လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။
ပထမဆုံး မနက်အစောကြီး ဘာညာက အိမ်ကို ကားနဲ့လာခေါ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖိုးသူတော်ကို သွားဝင်ခေါ်ပါတယ်။ ဖိုးသူတော်ကလည်း ရောက်မှ အိပ်ရာက နိုးလို့ ကားသမားကို ခဏစောင့်ဖို့ ပြောရသေးတယ်။ နောက်ပြီး ဗီနိုင်းထုတ်ဖို့ မြို့ထဲကိုသွားပြီး အပ်ရသေးတယ်။ အပ်တော့လည်း ညနေမှ ယူတဲ့ပြောပါရော။ မရဘူး တော်ကြာ ၁၀ နာရီပွဲစမှာလို့ ပြောပြီး မြန်မြန်လုပ်ခိုင်းရသေးတယ်၊ ဗီနိုင်းမှာလည်း လက မှားနေလို့ ပြန်ပြင်ခိုင်းရသေးတယ်။
မနက် ဆယ်နာရီမှာတော့ ကျွန်မတို့တွေ ကရ၀ိတ်ကျွန်း အ၀င်ဝမှာ လူစုကြပါတယ်။ နောက်တော့ ကန်တော်ကြီး ကလေးကစားကွင်းအနီး ညနေပိုင်း သီချင်းဆိုတဲ့နေရာဝန်းကျင် မြေကွက်လပ်တစ်ခုကို သွားရောက်ကြပြီး ဘလောဂ့်ဂါ အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ Debate လုပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစတုန်းက Role Play တွေပါ ဆော့ဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့် လူစုတာ နည်းနည်း အချိန်ကြာသွားတဲ့အတွက် ဒီအစီအစဉ်ကို မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးရှင်။ ဆော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းလေးကတော့ Blogger ဖွက်တမ်းလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဘလောဂ့်ဂါတွေရဲ့ နာမည်တွေ၊ ဘလောဂ့်နာမည်တွေကို လက်ဟန်ခြေဟန် အမူအရာတွေနဲ့ ဖွက်ပြီး အမည်ဖော်ရတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ရုပ်ရှင်ဖွက်တမ်း ကစားခဲ့သလိုပါပဲ။ အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆော့ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဆော့ပြီးတော့ နေ့လည်စာ စားသောက်ကြပါတယ်။ နေ့လည်စာ စားပြီးတဲ့ အခါမှာ စောစောက အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကပဲ Debate အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Debate လုပ်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကတော့
Blogger မှာ ရေးရတာကောင်းတယ် နဲ့ WordPress မှာ ရေးရတာ ကောင်းတယ်
Blogger ဖြစ်ရတာ ကောင်းတယ်၊ Blogger ဖြစ်ရတာ မကောင်းဘူး
facebook တောင် နည်းနည်းပါသေးတယ်။
Debate ပြီးသွားတော့ ကျွန်မတို့ လက်ရှိစုဝေးနေတဲ့ နေရာမှာ နေနည်းနည်းပူနေတာတဲ့ ချစ်သူကျွန်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ချစ်သူကျွန်းမှာလည်း ဆော့ခဲ့ကြ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဘလောဂ့်ဂါ သားဖြိုးကလည်း ကိုနိုင်လင်း ရေးတယ်ဆိုလား၊ ကိုနိုင်ဝင်းရေးတယ်ဆိုလား သီချင်းစာသားကို ဂစ်တာတီးပြီး ဆိုပြခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လက်ကိုကြက်ခြေခတ်ယှက်ကိုင်ပြီး လက်တွေကို မဖြုတ်ပဲ အားလုံး စက်ဝိုင်းပုံ ပြန်ဖြစ်အောင် လက်တွေကို ဖြေယူရတဲ့ ဆော့ကစားနည်းကို ဆော့ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲလေးကို လာရောက်ပေးကြတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါတွေကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့ Organizer အားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား ကျွန်မက ပြောချင်ပါတယ်။ ဘလောဂ့်ဂါ အချင်းချင်း အွန်လိုင်းမှာသာမက အပြင်မှာပါ ရင်းနှီး နွေးထွေးစေတဲ့ ဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးကိ နောက်လည်း အခွင့်အခါသင့်သလို ပြုလုပ်ပေးသွားချင်ပါသေးတယ်။ ဘလောဂ့်ဂါတိုင်းကိုလည်း အွန်လိုင်းမှာသာမက အပြင်မှာ ချစ်ခင် ရင်းနှီးစေချင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လူမှုရေး လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။
ဒီနေ့ည (10) နာရီမှာတော့ ပြည်မြို့ကို Blogging Excursion အနေနဲ့ ထွက်ခွာကြအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွား အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြန်လာမှပဲ ပြောပြတော့မယ်။ ခုသွားတော့မှာ လိုက်မလား။ မြန်မြန်လာလေ လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်....
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, August 29, 2009
show details Jul 28
ရင်သွေးငယ်များ အကြင်နာဒီဆေးဝါး နှလုံးသားထဲ လိုအပ်နေကြပေမယ့်လည်း
တာဝန်ပျက်သူတွေဟာ ပေါ့ဆခြင်း လက်နက်နဲ့ (ဟင်း) ကလေးတို့ရဲ့ ဇီဝိန်အသက်ကို ခြွေခဲ့ပြီ
တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ၊ တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ၊ တို့လက်တွေ တွဲကာလှမ်းယူနိုင်ကြမယ် အနာဂတ်နေ့ရက်တွေ
ပိုမိုကောင်းမွန်စေချင် ကမ္ဘာ့ရင်သွေးတိုင်းအတွက်လေ တို့တတ်နှိုင်တဲ့တာဝန်များကို ထမ်းရွက်မယ်လေ
အိုး.. ကလေးဆိုတာဟာ အတူတူတွေပါ ဖယောင်များနှယ် ၀ိုင်းဝန်းလို့ ပုံသွင်း ကောင်းအောင်ဖန်တီး
အပြစ်မဲ့စင်ကြယ် ကလေးများရဲ့ ဘ၀လေးတွေ လူကြီးဖြစ်ကြ အဖြစ်ဆိုးမကြုံစေဖွယ်
(ဟယ်ရီလင်း) တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ၊ တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ၊ တို့အားလုံးအတွက် လှမ်းကာယူနိုင်မယ့် အနာဂတ်နေ့ရက်တွေ
အိုး.. ပိုမိုကောင်းမွန်စေချင် ရင်သွေးငယ်တိုင်းအတွက်ပဲ တို့တတ်နှိုင်တဲ့ တာဝန်တွေတိုင်းလဲ ထမ်းရွက်မယ်လေ
တစ်နေရာ တစ်ထောင့်ကတော့ ဒီအတိုင်းအစွမ်းနဲ့နော် အကူအညီပေးကြစို့ ကလေးများရဲ့ အတွက်ပေါ့
ငို.. ငို.. ငိုကြွေးကလေးငယ်များ (အိုး) ငတ်မွတ်မှုဝေဒနာတွေကိုလေ ဒီအတိုင်းကြည့်နေရက်နှိုင်ပါ့မလား
တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ၊ တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ၊ တို့လက်တွေ တွဲကာလှမ်းယူနိုင်ရမယ် အနာဂတ်နေ့ရက်တွေ
လုံးဝကောင်းမွန်အစဉ်အမြဲ (ဟင်း) ကလေးများစွာ အသက်များအတွက် တို့ ကရုဏာလက်တွေ ပေးဆပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီ
တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ၊ (တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ၊ ) တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ၊ (တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ၊ )
တို့လက်တွေ တွဲကာလှမ်းယူနိုင်ကြမယ့် အနာဂတ်နေ့ရက်တွေ (အနာဂတ်နေ့ရက်တွေ )
(တို့ချစ်တဲ့ငါ့ရဲ့ကလေးများအတွက်) တို့တတ်နှိုင်တဲ့တာဝန်များကို ထမ်းရွက်မယ်လေ
တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ၊ (တို့ရဲ့ကလေးများ) တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ၊ (ငါတို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ)
တို့လက်တွေ တွဲကာလှမ်းယူနိုင်ကြ/ရမယ် အနာဂတ်နေ့ရက်တွေ (နောက်ထပ်နေ့တွေထဲ)
ပိုမိုကောင်းမွန်စေချင် (အကူအညီတွေပေးရင်း) ကမ္ဘာ့ရင်သွေးတိုင်းအတွက်လေ (ရင်သွေးငယ်များရဲ့အတွက်)
(တို့တတ်နှိုင်သမျှတွေ အားလုံးပဲ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကောင်းနေပြီဟေ့)
တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ၊ (တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ) တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ၊ (တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ၊ )
တို့လက်တွေ တွဲကာလှမ်းယူနိုင်ကြမယ် အနာဂတ်နေ့ရက်တွေ (အနာဂတ်နေ့ရက်များ)
တို့တတ်နှိုင်သမျှကို အားလုံးပဲ အတူ ဆောင်ရွက်မယ် ရေးဟေ့..
တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ (ဒီကမ္ဘာကြီးအတွက်) ရင်သွေးတိုင်းအတွက် (တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ)
နောင်အနာဂတ်တွေ တို့လက်တွေတွဲရင်း လှမ်းယူကြရအောင် (အနာဂတ်နေ့ရက်များ)
လုံးဝကောင်းအောင် ကမ္ဘာ့ရဲ့ရင်သွေးငယ်တိုင်းအတွက် ဟေးအကြင်နာတွေကိုပေးဆပ်ဖို့ (ဟေး.. ရေး..)
« Back to "Personal"
Remove label "Personal"
‹ Newer 96 of 450 Older ›
Get Gmail on your phone. It's super-fast. Visit http://mobile.google.com/ on your phone's web browser. Learn more
You are currently using 617 MB (8%) of your 7370 MB.
Last account activity: 19 hours ago at IP 117.47.139.126. Details
16 September 2009 at 08:20
18 September 2009 at 15:10
What is Life? ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲ
Blog Day တွေ့ဆုံပွဲ နှင့် သရေခေတ္တရာ 2.0 ခရီးစဉ်
Blog Day 2009 Gathering Ceremony and Blogging Excu...